Alexandra Arch သွားတောလား – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
March 8, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
Alexandra Arch သွားတောလား
ဒီကိုလာ ဘလော့မှာ အဲဒီခရီးစဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့ Henderson Waves ဆိုတဲ့ တံတားကြီးကို သွားချင်နေတာ အတော်ကြာသွားပြီ။ အဲဒါနဲ့ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်မှာ အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်ပြီး သွားတယ်။ မသွားခင် ထုံးစံအတိုင်း Googling လုပ်လိုက်တော့ မြေပုံတောင် ဆွဲပြထားရှာတယ်။ Nature Walk (Southern Ridges) ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်တဲ့ အဲဒီ တံတားကိုရောက်ဖို့ လျှောက်ရမယ့် လမ်းက မသက်မသာ နိုင်လိုက်တာဗျာ။ ဒီမှာကြည့်။
လမ်းလျှောက်ဖို့ အစအဆုံးသွားရင်9ကီလိုမီတာကျော်ကျော်လေး လျှောက်ရပါမယ်။ မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှာ Harbor Front MRT ကိုေ၇ာက်ပါတယ်။ MRT ကနေ ထွက်လိုက်ရင် Merang Trail အစဘက်ကို ရောက်ပါတယ်။ Trail အစမှာ အခုလို လမ်းပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Mount Faber Park အစမှာလည်း အဲဒီလို စာတမ်းလေး ထိုးထားပါသေးတယ်။
ခပ်ကြမ်းကြမ်း အတက်လေး ၃ ခု အပြီးမှာ Mount Faber Park ထိပ်ကို ရောက်ပါမယ်။
သစ်ပင်တွေကြားထဲကနေ မြို့ထဲကို လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ကားလမ်းအတိုင်း ကုန်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားရုံပါပဲ။ တံတားကို သွားတဲ့ လမ်းထိပ်မှာ ခန့်ခန့်ကြီး လမ်းညွှန်တစ်ခုထားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
တံတားကိုပဲ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တံတားအောက်ဘက် အထိ SBS Transit ဘတ်(စ်)ကား 145 နဲ့ 131 (harbor front MRT/Vivo City ရှေ့က မှတ်တိုင်ကနေ စီးရင် ၄/၅ မှတ်တိုင်လောက်ဆို ရောက်ပါတယ်။ After Henderson Hights မှတ်တိုင်ပါ) , 273 (အဲဒါတော့ ဘယ်က ပြောင်းစီးလို့ရမလဲ မသိပါ) တို့ ရောက်ပါတယ်။ ကုန်းပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာတော့ ကို TZA ပြောသလို ဟောဟဲ ၃ ကြိမ်မက ရေရွတ်ရနိုင်ပါတယ်။ တံတားရဲ့ တဘက်ကနေ တခြားတဘက်ကို လျှောက်တာကတော့ တခြား ထူးထူး ခြားခြား မခံစားရပါ၊ နားချင်ရင် လှိုင်းခုံးအောက်တွေမှာ ထိုင်စရာ၊ ခြေဆင်းလဲလူ နေစရာလေးတွေ ရှိတာတော့ သဘောကျစရာပါပဲ။
နားနားနေနေ မုန့်စား၊ ရေသောက်ပြီး ဆက်လျှောက်တော့ လျှိုလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာ တောက်လျှောက် လျှောက်လမ်းဖေါ်ထားတဲ့ Canopy Walk ဘက်ကို သွားပါတယ်။ အဲဒီလျှောက်လမ်းမှာ အဆင်းအရမ်း မတ်ရင် ZigZag ကွေ့လိုက်ပြီး လှေခါးထစ်သုံးစရာမလိုအောင် လုပ်ထားတာကြောင့် ရှမ်းပြည်ဘက်က တောင်ပတ်ကားလမ်းတွေကို သတိရသွားပါတယ်။ ဒါကတော့ တောင်ပတ် လူသွားလမ်းပေါ့။
Metal Canopy Walk
အဲဒီလျှောက်လမ်းအဆုံးမှာတော့ ကိုTZA က ‘ခပ်မိုက်မိုက်’ လို့ မှတ်ချက်ချထားတဲ့ Alexandra Arch တံတားကို ရောက်ပါတယ်။ တံတားနှစ်ခုလုံးက ကားလမ်းအပေါ်ကို ကျော်ထားတာခြင်း တူပါတယ်။
နောက်ပြီး Southern Ridges အစအဆုံးလျှောက်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကား/ရထား စီးဖို့ အဆင်ပြေတာ ဒီနေရာပါ။ ကျွန်မကတော့ လမ်းလျှောက်နိုင်သလောက် လျှောက်ပြီး ကြုံတဲ့နေရာက ကားပြောင်းစီးမယ့် အကြံနဲ့ ဆက်လျှောက်လိုက်တာ…….. Floral Walk လမ်းတိုလေး လျှောက်၊ ရောက်သွားတဲ့ နောက်တစ်နေရာက Hort Park ပါ။
ပန်းတွေ လှတယ်ထင်လို့ ပါသွားတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း အစုတ်လေးနဲ့ပဲ ဖြစ်သလို ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူများတွေတော့ လှတပတ ရိုက်ထားကြမယ် ထင်ပါတယ်။
Kent Ridge Park ဘက်ကို ဆက်လျှောက်တော့ လူက နည်းနည်းတော့ ညောင်းနေပြီ။ အဲဒီမှာက Forest Walk ဆိုပြီး သစ်ပင်တွေကြားထဲမှာ သစ်သားလျှောက်လမ်းလုပ်ထားတယ်လို့ တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်လျှောက်တာ၊ မတတ်နိုင်ရင်တော့လည်း အဲဒီနေရာကျမှ အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပါ။ သစ်သားလျှောက်လမ်းပေါ်ကို တက်ဖို့ အတော် မောသဗျ။ ကုန်းပေါ်ကို အတက်မှာ ဟောဟဲဆိုက်နေလို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဂျပန်မိသားစုက ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရီသွားကြသေးတယ်။ သူတို့က အဆင်းလမ်း။ သူတို့ တက်လာတဲ့ဘက်ကို ကြည့်မိမှ သေဟဲ့ နန္ဒိယ လို့ ရွတ်မိတယ်။ ကိုယ်တက်လာတာ Park ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ခြေသွားလမ်းကိုး။ မြွေလိမ်မြွေကောက် ဖောက်ထားတဲ့ လမ်းလေးက မျက်စပစ်ပြနေသလိုပဲ။
အဲဒီ သစ်သားလျှောက်လမ်းထိပ်မှာ အဲဒီနေ့အတွက် ဒုတိယမ္ပိ ဟောဟဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာပဲ စကာင်္ပူကျွန်းကလေးရဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာတွေကို တွေ့ခဲ့၊ သိခဲ့ရတော့ ဟောဟဲရကျိုးနပ်တယ် ဆိုရမှာပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာ ဂျပန်တွေ မလေးကျွန်းဆွယ်ကို လုံးဝ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးနေရာလို့ ဆိုရမယ့် စကာင်္ပူက တိုက်ပွဲတွေ၊ ခံစစ်နေရာတွေ၊ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေ၊ မြေပုံတွေကိုပါ Kent Ridge Park ကုန်းထိပ်မှာ Look Out Point အနီး ပြသထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး နေ့ခင်း ၂နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့ West Coast Park အထိ ဆက်မလျှောက်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အနီးဆုံး Buona Vista MRT ကို SBS Tranist ရဲ့ Service 200 နဲ့ ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ရွှေတောင်ကြားလို နေရာထဲရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အနီးအနားမှာတော့ Science Park ဘက်ကို ထွက်လို့လည်း ရပါတယ်။ မိုးတိမ်တွေ မှောင်မည်းလာလို့ မသွားဖြစ်တော့တာပါ။
အဲဒီ Kent Ridge Park ကနေ မြို့ထဲကို ပြန်ထွက်တဲ့လမ်းမှာတော့ SBS ရဲ့ Driver တွေကို အထင်အမြင် မသေးတော့ပါဘူး။ မေမြို့ကို အသွားလမ်းတို့၊ ကွတ်ခိုင်ကို အသွားလမ်းတို့ အရင်တုန်းက ကျဉ်းပါတယ်။ ကားနှစ်စီး ရှောင်သာရုံတောင် နေရာတိုင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီဒေသက ကားသမားတွေကို စံထားလောက်တယ် အောက်မေ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလမ်းကြောတွေလည်း တောင်တွေ ဖြိုပြီး ချဲ့လိုက်တာ အတော် ကျယ်ကုန်ပါပြီ။ အခု ဒီလမ်းမှာ အဲဒီ လမ်းတွေကို ပြန်သတိရမိတယ်ခင်ဗျ။ တော်တော်ကျဉ်းတဲ့ တောင်ပတ်လမ်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလည်း ကားတွေ တ၀ီးဝီး၊ ကိုယ်စီးတဲ့ကားကလည်း သေးသေးကွေးကွေးမဟုတ်၊ အရှိန်ကလည်း ခပ်တင်းတင်း၊ ခဏတဖြုတ်မို့ တော်သေးတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မိုးပေါက်တွေ မသည်းခင်ပဲ MRT ထဲ ၀င်ပြီး ကိုယ့်ခြေသလုံးလေး ကိုယ်နှိပ်ရင်း အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ရပါကြောင်း။
နောက်ဆုံး မှတ်မိလိုက်တာကတော့ အဲဒီနေ့ ညနေ 5:30 မှာ Merlion ကြီး မိုးကြိုးခ ခဲ့တဲ့ အကြောင်းပါ။ နောက်နေ့ ညနေမှ သိပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ညနေခင်းက သည်းကြီးမည်းကြီး မိုးရွာ၊ မိုးကြိုးတွေ ပစ်၊ လျှပ်စီးတွေလက်နဲ့ အိမ်ရောက်တော့တောင် ကံကောင်းလို့ မိုးလွတ်တာလို့ ပြောဖြစ်ပါသေး။
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Benifits, strength. Bookmark the permalink.
Web and “Fats” →
12 thoughts on “Alexandra Arch သွားတောလား”
ုkom | March 8, 2009 at 11:33 am
TZA ကောင်းမှူ သာဓု.။ သာဓု . သာဓု
TZA | March 8, 2009 at 1:36 pm
Hahah.. you are great! I haven’t been to Alex.Arch yet.
ကုမ်ရာသီသူ | March 9, 2009 at 4:46 am
အဟီး။ သွားချင်အောင် ညွှန်းတုန်းက ညွှန်းထားတာကိုးဗျ။ အဲဒီ Alexandra Arch ဘက်က တက်ရင် အတက်နည်းနည်း သက်သာမယ်ထင်တယ်။ သူက လမ်းကြောတော့ ရှည်တယ်။ Henderson Waves သို့ ၂.၃ km လို့ ရေးထားတာတွေ့ခဲ့တယ်။
ကုမ်ရာသီသူ | March 9, 2009 at 4:47 am
အမKOM သာဓုကို ကိုယ့်အတွက်လို့ မှတ်လိုက်တယ်နော် 😀 (ကိုTZA ရဲ့ ကောင်းမှုဖြစ်ပေမယ့် :P)
ုkom | March 9, 2009 at 6:03 am
မှာ လင့်လုပ်ထားတယ။် congratulations!
ကုမ်ရာသီသူ | March 9, 2009 at 6:08 am
ဝေးဟေးဟေး၊ တဂယ်လားအမ၊ ၀မ်းသာစရာကြီး ၊ သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကျေးဂျူး၊ ကျေးဂျူး။
MSN | March 9, 2009 at 12:41 pm
wesheme ကနေ ရောက်လာပါတယ်။ ဒီတပတ်အားရင် သွားဦးမယ်
လူကြီးတွေနဲ့ သွားမှာဆိုတော့ အနီးဆုံးနေရာကနေ လမ်းဆင်းလျှောက်မှဖြစ်မယ်။ သိတဲ့သူတွေ ပြောပါဦး
ကုမ်ရာသီသူ | March 10, 2009 at 1:01 am
အနီးဆုံးနေရာကတော့ တံတားအောက်က မှတ်တိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အတက်တော့ အတော်လေး ကြမ်းပါတယ်။ နည်းနည်း ပြေပြီး တက်မှန်းမသိ တက်သွားနိုင်တာက ခရီးဝေးတဲ့ Alexandra Arch ဘက်က အတက်ပါ။ Sat, Sun, PH တွေမှာ Harbor Front Interchange ကနေ အဲဒီ Park တွေထဲကို ဘတ်စ် Service: Park 409 ရောက်ပါတယ်။ တံတားဘက်မှာတော့ မှတ်တိုင်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ Mount Faber Park ထိပ်မှာတော့ မှတ်တိုင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေအတွက် အဆင်အပြေနိုင်ဆုံးက Mt. Faber Park ထိပ်ထိ ဘတ်စ် စီး၊ ပြီး Henderson Waves တံတားဘက်ကို လမ်းနည်းနည်းပဲ လျှောက်ရပါတယ်။ အတက်၊ အဆင်းရယ်လို့ သိပ်မသိသာပါဘူး။ အဲဒီတောင်ကုန်းထိပ်ထိ အငှါးကားစီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နွေး | March 16, 2009 at 1:05 am
အမ ရေ…မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက်..ကျေးဇူးပါနော်…
ကုမ်ရာသီသူ | March 17, 2009 at 8:59 am
ရောက်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်ရှင့်။ 🙂
MrDBA | March 28, 2009 at 2:32 am
မရောက်တာကြာလို့ လာဖတ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သွားမလို့ချောင်းနေတာ ခုတော့ သေသေချာချာဖတ်လိုက်ပြီ။
ကုမ်ရာသီသူ | March 28, 2009 at 3:23 am
Bro. DB တို့သွားတဲ့ တောင်တက်လမ်းလည်း သွားမလို့ပဲဗျ။ သွားခါနီးရင် ကားလမ်းညွှန် လာမေးဦးမယ်။